Wariye Serjito oo amar la duldhigay, ka hor inta aan xabsiga laga sii deyn | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wariye Serjito oo amar la duldhigay, ka hor inta aan xabsiga laga...
Wariye Serjito oo amar la duldhigay, ka hor inta aan xabsiga laga sii deyn
Wariye Maxamed Deeq Cabdiraxiin (Serjito) oo ka mid ah Wariye-yaasha ka hawlgala Magaalada Baydhabo ayaa dib u helay xorriyadiisa.
Wariyaha ayaa waxaa Axadii lagu xiray Magaalada Baydhabo, ka dib markii ay hoygiisa ka soo kaxeeyeen Ciidamada Booliska, kuna xireen Saldhigga Dhexe ee Baydhabo, xilli aanu waxba kala socon sababta lagu soo xiray.
Wariyaha oo xaqiijiyay inuu dib u helay xorriyadiisa ayaa dhanka kale daboolka ka qaaday inay jirto caqabad kale, taasoo ah inaanu sidii hore magaalada uga hawlgeli karin.
“Al Xamdullillaah dib ayaan u helay xorriyadeeda, inkastoo la’igu wargeliyay inaan ahay qof ku jiro xabsi korka ka feedan, sidii horena aan u shaqeysan karin, mana garan karto sababta.” Ayuu yiri Wariyaha.
Waxaa uu sheegay in Taliska Booliska uu u sheegay inuu ka dheereeyay guuxiisa, isla-markaana aanu si xor ahi uga shaqayn karin Magaalada Baydhabo.
“Saraakiisha Booliska waxay igu yiraahdeen waxaad ka dheereysay guuxaaga, si xor ahna uma shaqeysan kartit, yacni waa hanjabaad la’igu sheegaayo inaan ka dheereeyay Wariye-yaasha kale.” Ayuu yiri Serjito oo ka hawlgala mid ka mida telefishinada dalka.
Serjito ayaa xusay in loogu hanjabay in xabsiga lagu soo celin doono, haddii markale lagu helo war liddi ku ah Maamulka Koonfur Galbeed.
“Waxay yiraahdeen haddii fal kale oo liddi inagu ah aan kugu helno ogow xabsiga ayaan kugu soo celin doonnaa, cid naga kaa celin kartana ma jirto, marka caqabadaas ayaa jirto, waana markii labaad ay i xirayaan, oo ay igu xadgudbayaan ciidamada iyo maamulkaba.” Ayuu yiri ninka Wariyaha ah.
26-kii bishii August ayay ahayd markii sidaan oo kale Serjito loogu xiray Magaalada Baydhabo, ka dib markii uu wareystay dad dhaliilay shaqada Wasaaradda Haweenka, Xuquuqul Insaanka & Arrimaha Qoyska ee Koonfur Galbeed, inkastoo maalmo yar ka dib xabsiga laga sii daayay.
Previous articleC/qaadir Siidii oo ka hadlay dagaalkii Magaalada Marka
Next articleShacabka Mandhera oo cabasho ka gudbiyay Ciidamada Jubbaland